Imiboniso: Indlela elula yokubulala intlanganiso | Martech Zone
NgoMgqibelo, Matshi 14, 2009 NgoMgqibelo, Oktobha 18, 2014 Douglas Karr
ikunye umboniso owoyikekayo wePowerPoint. UJean Palmer Heck usisithethi esidlangalaleni kwaye Umqeqeshi othetha esidlangalaleni owabelana nencwadi yakhe, Oonombombiya, Iipikoko kunye neePancakes nam. Yincwadi emnandi yePowerPoint ukungasebenzi kakuhle… Iya kuba ndim.
Kwicala elifanelekileyo, izilayidi zam zePowerPoint ziye zavela ngokuhamba kwexesha kwaye ndilandela ezona ndlela zilungileyo zokuhlela. Nantsi indawo yesilayidi ekwabelwana ngayo kwifayile ye Ukunyusa inkqubo yakho blog kwi Ulwazi ngeWalker Ndicinga ukuba ngumzekelo omangalisayo wentetho entle… ngengcebiso enkulu yokwakha imiboniso emikhulu.
Isikhokelo sikaJean sibonelela ngeefomyula eziqinisekisiweyo, indlela yokwenza izinto, iingcebiso kunye nemibono yokuyila uboniso olungcono lwePowerPoint. Kuba imifanekiso yeyona nto ibalulekileyo ekuyileni umboniso omkhulu-ingcebiso yam yeyokuchitha ixesha elithile iStockphoto ukufumana umfanekiso ocacileyo oxhasa ulwazi ozama ukuluhambisa.
Chitha imali kwimifanekiso emikhulu- lutyalomali olukhulu!
tags: alexei kapterevukufa ngamandlaipower Pointintshumayeloi slidedi
Landa ababhali abaninzi ngeGoogle Analytics
Mar 14, 2009 ngo 2:18 PM
Enye indlela entle yokufumana izinto ezibonwayo kukwenza uphendlo oluphambili kwiFlickr ngebhokisi ethi "Phendla kuphela iCreative Commons" ekhangelweyo.
Qiniseka nje ukuba ulandela inkcaso kunye nezikhokelo zokusetyenziswa.
Ndimangalisiwe kukuba ndiphile ixesha elide kangaka ngenani lemiboniso embi endiyibonileyo.
Apha kwihlabathi elingcono. 😀